I-Kalispell Studio ku-1 Acre by Shops & Glacier Park - I-Airbnb
I-Kalispell Studio ku-1 Acre by Shops & Glacier Park
** Sicela uqaphele umninikhaya nezinja zabo ezi-2 bahlala esizeni, endaweni ehluke ngokuphelele, futhi bangase babekhona ngesikhathi sokuhlala kwakho **
Hlela uhambo lwakho olulandelayo lwentaba yase-Montana kulesi situdiyo esihle sase-Kalispell. Lesi sakhiwo sinikeza izivakashi ezi-5 indawo yangaphakathi enefenisha enethezekile kanye nehektare lomhlaba omuhle onendandatho yomlilo, izihlahla zezithelo ezivuthiwe, nengadi yemifino. Noma ngabe usedolobheni ukuyoshwiba e-Whitefish Mountain noma uhambe uzungeze i-Glacier National Park, lesi situdiyo siyisisekelo sekhaya esifanele!
Isitudiyo: I-Queen Bed, I-Twin-over-Full Futon Bunk Bed
Yamukelwe uchungechunge lwezitshalo ezivuthiwe ezihlala ziluhlaza, le ndawo izokulethela injabulo ngaso leso sikhathi. Chitha izinsuku zakho uhlola amahlathi ezwe agcwele izilwane zasendle kanye nobusuku bakho ugazinga ama-s'mores nabantu obathandayo eduze komgodi womlilo ongaphandle.
Ingaphakathi elithokomele linamapulangwe e-rustic wood panel kanye nokuhlobisa okuhlukile kwesitayela sezwe laseNtshonalanga, kusukela kumaphosta ka-John Wayne kuya kuma-lasso ezintambo namabhuzu e-cowboy.
Qala usuku lwakho ngokuphuza inkomishi yakho yekhofi yasekuseni kwesinye sezihlalo ezinyakazayo ezi-2 kuvulandi omboziwe ngenkathi ubuka indawo ezolile. Ngaphambi kokuphuma ngomnyango, jabulela ukudla okusheshayo endaweni yesidlo sasekuseni yabantu abangu-2 ukuze uqhubekisele phambili uhambo lwakho lwansuku zonke!
Ayikho indlela engcono yokufudumala ngemva kosuku olubandayo lwasebusika kunokuba ukhululeke eduze neziko likagesi eliseduze ne-TV yesikrini esiyisicaba esingu-32-intshi. I-twin-over-full futon bunk bed iyindawo ekahle yokubamba isihlwathi sasemini noma ujabulele ukufunda okuthandayo ngenkathi usalinde isidlo sakusihlwa.
Zilungisele idili elishisiwe lesidlo sakusihlwa ku-grill bese uqeda ubusuku ngemuvi ku-TV yesikrini esiyisicaba. Uma ekugcineni usulungele ukulala, phumula komatilasi aba-3 abanethezekile bese ukhukhuleka ungene ngobusuku obuzolile bokulala.
Ngalobo busuku ongazidli ngabo endaweni, yiya e-Kalispell ukuze uhlole indawo yokudla yasendaweni! Shayela imizuzu engu-9 ukuze ufike ku-Desoto Grill, indawo eshisayo yasendaweni ye-BBQ ephekwe kancane, ubhiya obandayo, kanye nokwamukela izihambi okuningi okufudumele okuvela kumnikazi okanye naye u-Shawna.
Uma ufuna i-adventure, shayela imizuzu engu-45 ukuze ufinyelele i-Apgar Visitor Centre e-Glacier National Park. Isikhungo sezivakashi siyisiqalo esihle kakhulu sanoma yiziphi izigigaba zakho ze-National Park futhi sinikeza amabalazwe ahlukahlukene epaki, ulwazi lwesiteshi sonogada, kanye nolwazi olujwayelekile lwepaki!
Kunoma yibaphi abathanda ukushushuluza eqhweni, qiniseka ukuthi ushayela ngaphezu kwamamayela angu-20 ukuze ufike e-Whitefish Mountain Resort. Le ntaba inikeza imizila ephawuliwe engaphezu kwe-100, inqwaba yesitsha nokushushuluza kwezihlahla, kanye namapaki ezindawo ezi-4. Igquma livulekele nokuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ku-ziplining, nokuhamba ngezinyawo phakathi nezinyanga zasehlobo.
Izakhamizi zilithatha ngokungathi sína igalofu lazo futhi uma ufuna ukuthola umdlalo ungabheki kude kune-Village Greens Golf Course. Isifundo singaphansi kwemizuzu emi-5 ukusuka efulethini futhi sinikeza imifino emihle kakhulu eFlathead Valley!